दुई महिनामा दुई खर्बको आयात, अझै समृद्धिको गफ मात्र हान्ने प्रधानमन्त्री ज्यू ? (भिडियोसहित) « News24 : Premium News Channel
पछिल्लो महिनाको आयात
काठमाडौं, २६ असोज । नेपालको अर्थतन्त्र निर्यात भन्दा आयातमुखी छ । वर्सेनि नेपाललमा आयात हुने सामग्रीको सङ्ख्या र मात्रा बढ्दै छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको आयात देशको कुल बजेट भन्दा बढी मूल्य बराबरको भएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४÷७५को पछिल्लो दुई महिनाको तथ्यांक पनि भयावह छ । हेरौं, चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो दुई महिनामा कुन देशबाट कति मूल्य बराबरको सामान आयात भयो ?
साउनमाः १२ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ
भदौमाः १२ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ
साउनमाः २ अर्ब १८ करोड ८९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ
भदौमाः ५ अर्ब ९२ लाख २० हजार रुपैयाँ
साउनमाः १ अर्ब ९७ करोड १५ लाख १९ हजार रुपैयाँ
भदौमाः २ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख २४ हजार रुपैयाँ
साउनमाः १ अर्ब ४७ करोड ५५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ
भदौमाः २ अर्ब ८६ करोड ६९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ
साउनमाः १ अर्ब २० करोड ८९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ
भदौमाः २ अर्ब ५९ करोड १६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ
साउनमाः १ अर्ब १२ करोड ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ
भदौमाः १ अर्ब ९७ करोड ५२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ
साउनमाः ९६ करोड ८ लाख ६ हजार रुपैयाँ
भदौमाः १ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ
साउनमाः ९२ करोड १७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ
भदौमाः १ अर्ब ९१ करोड ८७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ
साउनमाः ९१ करोड ६६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ
भदौमाः १ अर्ब ७९ करोड ५३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ
साउनमाः ८७ करोड ९७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ
भदौमाः १ अर्ब ४४ करोड २६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ
साउनमाः ८६ करोड ६९ लाख २० हजार रुपैयाँ
भदौमाः १ अर्ब २६ करोड ७५ लाख ८ हजार रुपैयाँ
साउनमाः ८४ करोड ८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ
भदौमाः २ अर्ब ८ करोड ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँ
साउनमाः ८१ करोड ८ लाख १७ हजार रुपैयाँ
भदौमाः १ अर्ब ४६ करोड ३६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ
साउनमाः ७६ करोड ६४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ
भदौमाः १ अर्ब ६६ करोड ७२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ
साउनमाः ७४ करोड २९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ
भदौमाः १ अर्ब ५६ करोड ३४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ
साउनमाः ६३ करोड ६५ लाख १६ हजार रुपैयाँ
भदौमाः १ अर्ब ६५ करोड ४५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ
साउनमाः ६१ करोड ४० लाख ६३ हजार रुपैयाँ
भदौमाः १ अर्ब ३ करोड ८९ लाख १९ हजार रुपैयाँ
साउनमाः ४५ करोड ८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ
भदौमाः १ अर्ब ३ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ
यो तथ्यांकका अनुसार देशमा आयात हुने बस्तु र त्यसको मात्रा बढिरहेको छ । जुन देशको अर्थतन्त्रका लागि दुखद पक्ष हो ।
चालु अर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा नेपालले कुल २ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड ६६ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात गरेको छ । नेपालले सामान आयात गर्ने १५५ देशहरुमध्ये सबैभन्दा बढी भारतबाट ६२ दशमलदब ९ प्रतिशतको अयात गरेको छ भने चीनबाट १२ दशमलव ५ प्रतिशत आयात गरेको छ । र बाँकी अन्य देशहरुबाट गरेको छ । चालु अर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा नेपालले झण्डै साढे २ खर्ब बराबरको आयात गरेको छ ।
यहीं अनुपातमा अन्य महिनाहरुमा पनि आयात हुने हो भने यो आर्थिक वर्षमा नेपालको आयात रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा बढी हुने संभावना छ ।
दुई तिहाई बढी नागरिक कृषि पेसामा आवद्ध भएको देशमा दाल, चामलदेखि फलफूल र तरकारी समेत विदेशबाट ल्याउनुपर्ने पट्यारलाग्दो यथार्थ भोगिरहेका छौं, हामीहरु । चालू आर्थिक वर्ष दुई महिनामा मात्रै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको तथ्यांक छ ।
१ अर्ब ६१ करोड ५९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ
पशुबाट उत्पादित खाद्य समग्री (अण्डा, महलगायत)
४३ करोड ९४ लाख ४ हजार रुपैयाँ
६ अर्ब ११ करोड ७१ लाख २८ हजार रुपैयाँ
३ अर्ब १६ करोड ७४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ
१ अर्ब ७३ करोड २४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ
चिनी तथा मिठाईः
१ अर्ब १६ करोड ६ लाख १२ हजार रुपैयाँ
१० अर्ब ५७ करोड ८९ लाख ४ हजार रुपैयाँ
५८ करोड ४० लाख ७० हजार रुपैयाँ
४ अर्ब ५४ करोड ४० लाख १९ हजार रुपैयाँ
१ अर्ब ५२ करोड ८२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ
तयारी अनाज (पिठो, पाउडर दूधलगायत)
१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ
खेलौना तथा खेलकुदका सामानः
४८ करोड १४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ
१९ अर्ब ७५ करोड ३३ लाख १९ हजार रुपैयाँ
२५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ
फलाम तथा स्टिलः
१७ अर्ब १८ करोड ६९ लाख ४ हजार रुपैयाँ
१७ अर्ब ८ करोड ९९ लाख ८ हजार रुपैयाँ
४ करोड ३४ लाख ४ हजार रुपैयाँ
६७ करोड ८७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ
२८ करोड ९६ लाख १० हजार रुपैयाँ
८ अर्ब ६६ करोड ९३ हजार रुपैयाँ
चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा नेपालले गरेको आयात फलफुल, तरकारी र खाद्यान्नलगायतका वस्तु र त्यसको मूल्य हेर्ने हो भने नेपालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि अझै व्यापक प्रयास गर्न जरुरी छ । आयातलाई नघटाएसम्म मुलुकको खास विकास सम्भव नभएको विज्ञहरुको भनाई छ ।
तथ्याङकअनुसार देशको अर्थअवस्था निकै जर्जर छ । आयातको तुलनामा निर्यात अत्यासलाग्दो छ । देशमा समृद्धिको ठूला कुरा भएपनि अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुनै ठोस पहल भएको छैन । उत्पादनभन्दा आयातमा जोड दिएका कारण देशको अर्थस्थिति दयनीय अवस्थामा पुगेको हो ।
आवश्यकता भन्दा कम उत्पादन, सिमित उद्योग, नयाँ उद्योग खोल्ने पहलको अभाव, नीतिगत समस्या र लगानी गर्ने वातावरणकै अभाव हुनु जस्ता कारणले आयात र निर्यात बिचको खाडल निकै गहिरो हो । अब पनि स्वदेशमा नै वस्तु उत्पादनलाई जोड नदिने हो भने देशको अर्थतन्त्र झन् धरासायी बन्ने निश्चित छ ।
दुई महिनामा दुई खर्बको आयात, अझै समृद्धिको गफ मात्र हान्ने प्रधानमन्त्री ज्यू ?